August | 2011 | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
Posted on August 31, 2011 by chitnge
မြတ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ ရေတံခွန်တောင်လှိုင်ဂူ တတိယည ရှေ့ဆက်ရမည့်ခရီး ရှေ့ဆက်ရမည့်ခရီးမှာ ခိုနန်းရေယာဉ်လှိုဏ်ဂူသို့ဖြစ်၍ မန္တလေး၊ မေမြို့ကားလမ်း ကျောက်ချော ကားဂိတ်မှ ကျွက်နဖားတောင်ခြေဘက်သို့ သွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုလှိုဏ်ဂူသို့ လွန်ခဲ့သော ဆယ်နှစ်ခန့်က ဆရာမြတ်နှင့် အတူ ရောက်ခဲ့ဘူးသည်။ ထိုစဉ်ကမူ ဆရာပါသဖြင့် များစွာ နှစ်ခြိုက် အားရ၀မ်းသာ ရှိခဲ့ပါသည်။ ယခု အကြိမ်မှာမူ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကိုယ့်စွမ်းကိုယ်ကိုးနှင့် အမှန်တရားကို ကြီးထွားခိုင်မာစွာ အပိုင်ရရှိအောင် ကြိုးစားရပါလိမ့်မည်။ ထိုဂူတွင် ထူးခြားမှု တွေ့ရမည့် အကြောင်းကိုမူ မရောက်မီကပင် ကြိုတင် သိရှိနေခဲ့ပါသည်။ ထိုဂူသည်လည်း … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, မြတ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ	| Leaveacomment
မြတ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ ရေတံခွန်တောင်လှိုင်ဂူ တတိယည အပျက်တရား ဖက်မထားနှင့် မဂ်ဓားနဲ့ဖြတ် `အော် . . . မိမိဘ၀မှာ စွန့်လွှတ်မှုဖြင့် တရားအသိဉာဏ် တိုးတက်ရင့်သန်ခဲ့သည်ဖြစ်ရာ ဘာကို စွန့်ရစွန့်ရ ပင်ပန်းဝန်လေးခြင်း မဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ထားနိုင်ပေပြီ´ ဟု သုံးသပ်နေမိပေသည်။ တက္ကသိုလ်လောကကိုလည်း စွန့်လွှတ်ခဲ့ပါသည်။ သာသနာ့ဘောင်၌ ပျော်မွေ့တော့မည်ဖြစ်သဖြင့် လူဝတ်ကြောင်ကို စွန့်လွှတ်ရာမှ တက္ကသိုလ်လည်း ပါသွားပါသည်။ နောက်ဆုံး ခန္ဓာကိုယ်ကို စွန့်ရန်မှတပါး အခြားမရှိတော့ပါဟု ဆင်ခြင်မိပါသည်။ ၃၁ ဘုံ ရုပ်နာမ်စုံတို့သည် သင်္ခါရလောကကြီးမို့ ကိုယ်ကမစွန့်လည်း … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, အနိစ္စ, မြတ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ	| Leaveacomment
Posted on August 29, 2011 by chitnge
အနာဂါတ်ဘာလဲ??? ပစ္စုပ္ပုန်ဟာ အတိတ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ အနာဂါတ်က ပစ္စုပ္ပုန်ဖြစ်လာတာပါပဲ။ ဒီတော့ အချိန်ဆိုတာ ညွှန်းဘောင်အတိုင်း သွားနေသကဲ့သို့ပဲ ပစ္စုပ္ပုန် ပစ္စုပ္ပုန်တွေဟာ အတိတ် အတိတ်ဖြစ်သွားတယ်၊ တစ်ခါ အနာဂါတ်တွေဟာ ပစ္စုပ္ပုန်အဖြစ်နဲ့လာတယ် – ဒီလိုဆိုရင် အနာဂါတ်ဟာ ဘယ်နည်း ဘယ်ပုံ လာတာလဲ?? ဘယ်နည်း ဘယ်ပုံလာတာလည်း ဆိုတော့ သူက ထုံးစံအတိုင်းလည်း လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ် ဖောက်လာတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းလာလာ ဖောက်လာလာ လူတွေကတော့ ကြိုမသိနိုင်တာတွေ ရှိတယ်၊ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ သူက ထုံးစံအတိုင်းလာမှာလား ဖောက်လာမှာလား … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science	| Tagged Buddhism and Science, Myanmar Posts, သိပ္ပံ	| 1 Comment
မြတ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ ရေတံခွန်တောင်လှိုင်ဂူ တတိယည ၁၃၃၉ ခု၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၈) ရက် ၁၉၇၇ ခု၊ နိုဝင်ဘာလ (၄) ရက် ရေတံခွန်တောင် လိုဏ်ဂူတွင် (၂) ညမျှ သီတင်းသုံး အဓိဋ္ဌာန်ဝင်ကာ တရားဘာဝနာ ကျင့်ကြံ အားထုတ်ခြင်း၊ မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်း စီးဖြန်းခြင်းများကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပေပြီ။ တရား အားထုတ်ရခြင်း၏ ထူးခြားချက်ကို ပထမည မှတ်တမ်းတွင် အသေးစိတ် ဖော်ပြပြီးဖြစ်သည်။ ယနေ့ တတိယမြောက်ညဖြစ်ရာ နံနက်ခင်းကတည်းက ဧကသနိတ် (ဧကာသနိက) ဖြစ်၍ ဆွမ်းတထပ် … Continue reading →
Posted on August 28, 2011 by chitnge
မြတ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ ရေတံခွန်တောင်လှိုင်ဂူ ဒုတိယည ၁၃၃၉ ခု၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၇) ရက် ၁၉၇၇ ခု၊ နိုဝင်ဘာလ (၃) ရက် ယခုအပတ် ၀ါကျွတ်လျှင်ကျွတ်ခြင်း အဓိဋ္ဌာန်ခရီး ထွက်ခဲ့သည်မှာ သတ္တမမြောက်ညသို့ ရောက်ခဲ့ပေပြီ။ ပထမည၌ စစ်ကိုင်း သာလာယံတန်ဆောင်း၊ ဒုတိယည၌ ဓနုဖြူချောင် အခေါင်ပရမေ ဗိမာန်၊ တတိယည၌ ဓနုဖြူချောင် အာဗ္ဘေကာသိက ဓူတင်၊ စတုထ္ထည၌ ဓနုဖြူချောင် ရုက္ခမူ ဓူတင် အာဗ္ဘောကာသိက ဓူတင်နှင့် ရုက္ခမူ ဓူတင် ဆောင်စဉ်ညများ၌ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged ၀ိပဿနာ, Buddhism, Myanmar Posts, အနိစ္စရှု, မြတ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ	| Leaveacomment
Synthetic a-priori အဆက်
Posted on August 27, 2011 by chitnge
Synthetic a-priori အဆက် ‘ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ရပ်တွေကို ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့်မှာ အမှန်အကန်အဖြစ် သိနိုင်ကြောင်း’ ကတော့ အားလုံး သဘောတူ ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ‘ပစ္စုပ္ပန်ကနေ အနာဂါတ်အကြောင်းကို အမှန်အကန်သိနိုင်တယ်’ လို့ တင်ပြတဲ့ နေရာမှာ အတွေ့အကြုံသမားတွေကတော့ “အရာရာဟာ အတွေ့အကြုံနဲ့မှ ဆန်းစစ် အတည်ပြုသင့်တယ်” လို့ ပြောကြတယ် – Truth is what stands the test of experience. .. .. ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကို လက်ကိုင်ပြုကြတယ်။ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ … Continue reading →
မြတ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ ဤလောက၌ အတွင်းကမ္ဘာကို နိုင်သောသူသည်အရာရာကို နိုင်သောသူ ဖြစ်မည်တကား(အဆက်) သန်းခေါင်ကျော်ခဲ့ပြီးနောက် (၁) နာရီတိတိကြာသွားပြီ။ လှိုဏ်ဂူထဲ၌ တစ်ပါးတည်း မလဲမလျောင်း တရားဆင်ခြင်နေခဲ့သည်မှာ (၉) နာရီ ကြာညောင်းသွားခဲ့ပြီ။ နောက်ထပ် (၃) နာရီကြာလျှင် အဓိဋ္ဌာန် ပြီးစီးတော့မည်သာ။ မိမိကမူ ပြီးစီးအောင်မြင်ပြီး သကဲ့သို့ သဘောပိုက်ထားသည်။ ဆရာကောင်းတပည့် သားကောင်းတစ်ယောက် ကျောက်ကောင်းတစ်စေ့မို့ တစ်ညလုံး တစ်ပါးတည်း ဂူကြီးထဲ၌ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် တရားဆင်ခြင် နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အတွင်းအပြင် အနှောက်အယှက် အဖျက်သဘော မရှိ၍မဟုတ်၊ အနိစ္စချက် … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, အနိစ္စ, မြတ်စွာဘုရား, မြတ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ	| Leaveacomment
Posted on August 25, 2011 by chitnge
မြတ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ ဤလောက၌ အတွင်းကမ္ဘာကို နိုင်သောသူသည် အရာရာကို နိုင်သောသူ ဖြစ်မည်တကား တစ်ဦးတည်း ကောက်ချက်ချနေမိသေးသည်။ မိမိသည် သဘာဝကျလျက် အေးအေးဆေးဆေး ရှိလှသည်။ ချောက်ချောက်ချားချား ဘာတစ်ခုမျှ မဖြစ်။ မိမိ ကျောင်းသင်္ခန်း၌ နေရသလိုရှိသည်။ တောကြီးမျက်မဲ ဂူကြီးထဲ တစ်ဦးတည်း တရားကျင့်နေရသည်ဟူသော အသိမျိုးနှင့်မတူ။ အစစ ဣနြေ္ဒ ရလျက်ရှိသည်။ လုပ်သင့်သော ၀ိပဿနာနည်းကိုသာ ရှုသတ်ဆင်ခြင်လျက် ရှိ၏။ အဆက်မပြတ် အားထုတ်နေသည်။ ခန္ဓာဉာဏ်စိုက်လျက်ရှိ၏။ အသိသည် ဉာဏ်၌ကိန်းနေ၏။ ဉာဏ်သိသာ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်, ဟဒယ, လောကုတ္တရာ, မြတ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ	| Leaveacomment
Posted on August 24, 2011 by chitnge
Synthetic a-priori သိပ္ပံဒဿနပညာမှာ (Synthetic a-priori) ဆိုတဲ့ စကားလေးအကြောင်းကို ပြောပြချင်တယ်။ (Synthetic a-priori) ဆိုတဲ့ စကားလုံးကတော့ ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ အနာဂါတ်ကိစ္စတွေမှာ ဘယ်လိုဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာ ရှေးသိပ္ပံထဲက အမှန်အကန်အတိအကျ ကြိုတင်ပြီးတော့ သေခြာပေါက် သိထားပါသလား? ဆိုတဲ့ ပြဿနာပါပဲ။ ဒီကိစ္စကို ဒဿနပညာရှင်တွေက ဆွေးနွေးပေမယ့် သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ အရာရာကို အတွေ့အကြုံနဲ့ပဲ ဆန်းစစ်တာမို့ အခုလို ကြိုတင်ပြော ဟောကိန်းထုတ်တဲ့ ကိစ္စတွေဟာ ရာနှုန်းပြည့် မမှန်ကန်နိုင်ဘူးလို့ပဲ အဆိုပြုကြပါတယ်။ ဒီတော့ (Synthetic a-priori) ကို … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science	| Tagged Buddhism and Science, Myanmar Posts, ဗုဒ္ဓဘာသာ, သိပ္ပံ, လောကုတ္တရာ	| Leaveacomment
မြတ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ အကြောက်မကြီးနှင့် (အဆက်) လောက၌ မကောင်းမှု ပြုကျင့်ရမှာ မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံရမှာကိုသာ ကြောက်ပါ။ ကျန်အရာများကို မကြောက်ပါနှင့်။ အကြောက်မကြီးစေနှင့်။ အချို့သော အခွင့်အလမ်းများသည် ရံဖန် ရံခါ ကြောက်စရာလိုလို ပေါ်လာတတ်သည်။ အကြောက်ကြီးလျှင် အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးတတ်သည်။ ကြောက်စရာလား ပညာဗဟုသုတ ရမည့်အရာလား လျှင်လျှင်မြန်မြန် ချိန်ဆဆုံးဖြတ်ပါ။ အကြောက်ကြီးလျှင် မကြံ့ခိုင်ရာကျမည်။ မိမိကိုယ်မိမိ မယုံကြည်ရာ ကျမည်။ မကောင်းမှု မဟုတ်လျှင် လွယ်လွယ်ကူကူ အကြောက်မကြီးနှင့်။ ဤသို့ မိမိကိုယ်ကို မိမိ သတိပေးမိသည်။ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, ဟဒယ, အနိစ္စ, အသင်္ခတ, မြတ်စွာဘုရား, မြတ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ	| 1 Comment
မြတ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ – 11
Posted on August 23, 2011 by chitnge
မြတ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ သိပ္ပံနည်းကျ လက်တွေ့ကျသော အမြင်ကို ခံယူထားရန် လိုအပ်ခြင်း လူတစ်ဦး အတွက်ဖြစ်စေ ယောဂီတစ်ဦး အတွက်ဖြစ်စေ သိပ္ပံနည်းကျ လက်တွေ့ကျသော အသိပညာ ကိုသာ လက်ခံယုံကြည်သင့်ကြောင်း အဓိဋ္ဌာန်ဝင်စဉ် ဆင်ခြင်မိသည်။ ဆရာမြတ်သည် လက်တွေ့ကို လွန်စွာမှ နှစ်ခြိုက်လျက် စိတ်ကူးယဉ် ထင်မြင်ချက်များကို အားပေးလေ့ မရှိ။ အချို့သောယောဂီများ တရားထိုင်သဖြင့် ဘာမြင်သည် ညာမြင်သည် တောင်တောင်အီအီ ကြားရသည်။ ကိုယ့်စိတ်နှင့်ကိုယ် အလှည့်စား ခံနေရခြင်းဖြစ်သည်။ စိတ်အထင်နှင့် ရမ်းပြော ရမ်းယုံ နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ စိတ်အထင်နှင့်ရမ်းပြော ရမ်းယုံကြခြင်းကို … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, စိတ္တာနုပဿနာ, အနိစ္စ, မြတ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ	| Leaveacomment
Posted on August 22, 2011 by chitnge
မြတ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ (အဆက်) ဉာဏ်ပညာ ရရာရကြောင်း ညနေ (၆) နာရီခွဲဖြစ်၍ စာရေးသူ လှိုဏ်ဂူထဲသို့ ရောက်ခဲ့သည်မှာ (၂) နာရီကြာခဲ့ပေပြီ။ ဤလှိုဏ်ဂူထဲ၌ ဘုရားကန်တော့ မေတ္တာပို့ တရားရှုပြီး ခေတ္တနားလျက် ဉာဏ်ပညာ ရရာရကြောင်း နည်းလမ်းကောင်းများကို တစ်ဦးတည်း ဆင်ခြင်စဉ်းစားကာ နေမိသည်။ ဤ ဉာဏ်ပညာကို ရရှိအောင် မြတ်စွာဘုရား ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး ရှာဖွေဆည်းပူး ကျင့်ကြံအားထုတ် တော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာတော်အတွင်း၌ ဤ ဉာဏ်ကို အခြေခံနိုင်ရန် မြတ်သောအကျင့်၊ မြတ်သော အကြံကို ကျင့်ကြံနိုင်ရမည်။ … Continue reading →